Momba anay - Changzhou Sdpac Co., Ltd.
Ny vinan'ilay orinasa dia ny "hiezaka hanangana marika paosy plastika malaza eran-tany" ary namorona rafi-kolontsaina manokana
"Jereo ny ho avy fa ny paila ihany no ataovy"dia filozofianay momba ny asa aman-draharaha.
Changzhou SDPAC Co., Ltd. dia hamorona andian-paosy plastika amerikana avo lenta indrindra hamaly ny filan'ny mpanjifa ambony. Miaraka amin'ny fampivoarana ny akora sy ny akora eo amin'ny tsena anatiny dia azo hatsaraina ny vidin'ny fonosana. Ny paosy fonosana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampitomboana ny sandan'ny vokatra ivelany. Ho mariky ny fonosana avo lenta, ny paosy plastika dia manova tsy tapaka ny lamina fonosana fonosana eny an-tsena. Mino tanteraka izahay fa ny hoavin'ny paiso plastika dia fanavaozana mavitrika ary maneho tanteraka ny vanim-potoanan'ny vokatra manokana.
Ny orinasanay dia nametraka ny fiarovana ny tontolo iainana hatrany amin'ny toerana manan-danja amin'ny paikadim-pampandrosoana orinasa. Mandritra ny famoahana vokatra sy serivisy avo lenta ho an'ny mpanjifa, ny orinasa dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny tontolo voajanahary hahatratra ny fampandrosoana maharitra. Hifangaro ny fitantanana ny tontolo iainana amin'ny fitantanana orinasa, ary hametraka sy hanatsara tsikelikely ny rafitra fandaminana sy ny fitantanana ny tontolo iainana. Ny fikolokoloana ny tany iainantsika, ny fampihenana ny fandotoana ny fandotoana sy ny angovo angovo no tanjontsika mandrakizay.
2010 FAMPANDROSOANA NY ROUND PAIL A SERIES PAIL SERIES
2011 FAMPANDROSOANA SERIES PAIL B
2012 FAMPANDROSOANA NY PLASTIKA REHETRA
2013 FAMPANDROSOANA NY PAILY SASANY
2014 CONTAINERS SHARPS FAMPANDROSOANA
2015 MAMPANDROSO NY MPANORATRA MISAOTRA & MISAOTRA GAMMA
2016 FAMPANDROSOANA SERIES PAIL C
2017 FAMPANDROSOANA NY SERA PAILY D
2018 MAMPANDROSO NY PASTE elektrika afaka mandalo
2019 FAMPANDROSOANA KARTRIDA plastika sy pailan'ny baolina
2020 MAMPANDROSO NY PAILY WIPE